PPR /PEX/ Umbhobho &Fitting
Umatshini weSocket Fusion
Impundu Fusion Machine
Izixhobo zombhobho wePlastiki
IKlampu yokulungisa imibhobho
Izifakelo zentsimbi engatyiwayo
Wamkelekile kwi CHUANGRONG
INkqubo ye-HDPE yeSiphon yokuKhusela
Ukuthetha nge-siphon drainage, wonke umntu akaqhelanga kakhulu, ngoko ke yintoni umahluko phakathi kwemibhobho yokuhambisa i-siphon kunye nemibhobho eqhelekileyo yokuhambisa amanzi? Yiza usilandele ukuze ufumane. Okokuqala, makhe sithethe ngeemfuno zobugcisa zombhobho we-siphon wokuhambisa amanzi kwindawo yokuhambisa amanzi:...
Indlela yokuFakela i-PE Pipe
ngu admin ngo 21-06-05
Ukusebenza kofakelo lombhobho we-PE kubaluleke kakhulu kwiprojekthi, ngoko kufuneka siqhelane namanyathelo aneenkcukacha. Ngezantsi siza kukwazisa kwindlela yokudibanisa umbhobho we-PE, ukubeka umbhobho, ukudibanisa umbhobho kunye neminye imiba. 1.Iindlela zokuqhagamshelwa kombhobho: Kukho ma...
Wamkelekile kwiChuang Rong's Booth: 17Y24
ngu admin on 21-05-27
Ngo-Aprili 13-16 2021, Chinaplas International Rubber & Plastics Exhibition iya kubanjelwa eShenzhen International Convention and Exhibition Centre. Lo mboniso uza kusebenzisa iipaviliyoni ezili-16 kunye ne-350,000 yemitha yesikweri yendawo yomboniso kwiNdibano yeZizwe ngezizwe yaseShenzhen...
Emily UJim Annie Uvuyo